Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » France Travel News » Paris no nitana ny laharana voalohany ho an'ny mpandeha eropeana, arahin'i Orlando sy New York
Hotelbeds Group, dia namoaka androany ny famandrihana tsena loharanon-karena eropeana ho an'ny vanim-potoanan'ny Paska izay norefesina tamin'ny alin'ny efitrano ho an'ny marika amoron-trano misy azy ireo - anisan'izany ny Hotelbeds, Bedsonline, Tourico Holidays, ary GTA.
Nahita fironana marimaritra iraisana ho an'ny fitsangantsanganana an-tanàna ny Vondrona tamin'ity taona voalohan'ny Paska ity. Paris no mitana ny laharana voalohany ho an'ireo mpitsidika eropeana, arahin'i Orlando, New York, Roma ary Londres. Ny toerana tena tian'ny Asia eropeana indrindra dia ny Bangkok, Singapore, Hong Kong, Bali ary Tokyo. Mandritra izany fotoana izany, ireo toerana eoropeanina sy amoron-dranomasina nentin-drazana Eoropeana toa an'i Mallorca, Algarve na ny Canaries dia latsaka amin'ny laharana amin'ireo toerana malaza indrindra amin'izao fetin'ny paska izao.
Ny famandrihana ankapobeny avy amin'ireo mpandeha eropeana dia nanoratra fitomboana antonony raha oharina amin'ny vanim-potoanan'ny Paska tamin'ny taon-dasa, ary i Espana no tsena loharano manana fitomboana avo indrindra.
Na dia i Paris aza no toerana voalohany tian'ny Espaniôla - ary koa ny eropeana - amin'ity fialantsasatry ny paska ity, ny Espaniôla dia be lavitra noho ny zom-pirenena hafa no mijanona ao amin'ny fireneny ihany; raha ny tena izy dia 71% ny Espaniola no handeha hivezivezy anatiny amin'ity taona ity, isa izay nampiakatra isa 7 isan-jato hatramin'ny Paska lasa teo.
Ny toerana itodiana any an-toerana ankafizin'ny Espaniola dia ny tanàna toa an'i Madrid na Barcelona, ​​ary ireo toerana fialamboly toa an'i Tenerife, Mallorca na Benidorm. Mifanohitra amin'izany no tian'ny Alemanina ny mandeha any Eropa hafa na toerana lava be toa an'i Etazonia na Thailandy. Manaraka ny fironana mitovy amin'izany ny anglisy, fa aleony ihany koa ny toerana fialan-tsasatra iraisam-pirenena toa an'i Orlando na New York.
Maneho hevitra momba ny fironana amin'ny dian'ny paska, Carlos Muñoz, Tale mpitantana Bedbank, vondrona Hotelbeds, hoy izy "Amin'ity taona ity dia milatsaka aloha be ny Paka. Ireo mpanao ski no tena nahazo tombony tamin'ny fotoana fohy toy izany, fa amin'ity taona ity no toeran'ireo mpandresy. Mihabetsaka ny mpitsangatsangana eoropeanina no aleony mandany ny fialan-tsasatra any amin'ny tanàna eropeana sy amerikana avaratra. Vonona ny hanao dia lavitra ihany koa ireo mpanao vakansy, miaraka amin'ny fitomboan'ny famandrihana ny toerana aziatika sasany. Mino izahay fa izany dia taratry ny fironana ara-toekarena tsara sy fahatokisana avo lenta amin'ny fitsangatsanganana, izay mifanaraka tsara amin'ny famandrihana amin'ny fahavaratra.
“Na dia misy fiatraikany kely amin'ny toeran-kalalahana aza ity Paska voalohany ity, dia toa mandeha lavitra ny eropeana amin'izao fetin'ny lohataona izao raha ampitahaina amin'ny Paska tamin'ny taon-dasa. Ny fizahan-tany eto an-toerana dia hanana taona matanjaka iray any Espaina, miaraka amin'ny 71% amin'ireo Espaniola izay miala sasatra manao izany any Espana. ”